Herrega wayii hojjennu? Herregaan Garbummaatti dhuma haa goonu! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHerrega wayii hojjennu? Herregaan Garbummaatti dhuma haa goonu!
Herrega wayii hojjennu? #Herregaan_Garbummaatti dhuma haa goonu!
Herrega armman gadiitti hojjetamte kana mee daqiiqaa muraassaf irratti yaada. Dhuguma kana yoo goone Oromoon roorroo amma keessa jiru kana obbafachuu danda’a.
Kootta akkas goona! Oromoo #miliyoona_50 qabna miti? Kana keessaa Oromoo #miliyoona_25 qofaa qabsoo kana keessaatti diinagdeen hiriirsuuf haa hojjennu.
Hubadha, diinagdeen (maallaqaan) hirmaachisuu jechaan jira. Maallaqni kuni kallattiin Qabsoo Bilisummaa Oromoof akka oolu goona. #Herregichi kunooti.
Oromoo miliyoona 25 qofaa fudhaa!
1..#BAATIIN_QARSHII_10_QOFAA! Nomoonni kuni ji’aan #qarsii_10 qofaa haa gumaachaan!(Ji ‘an qarshii 10 jechuun guyyaatti #saantima_33 qofaa qabsoof gumachuudha!)
Walii gala ji’aan WBOf galiin argamu
Kana ji’a ja’aa qofaaf yoo buusne
(Biliyona 1fi miliyoona 500)
Namoonni kuni ji’aan #qarshii_100 qofaa haa gumaachaan! (Ji’aan qarshii 100 jechuun guyyaatti qarshii 3 fi saantima 33 qofadha!)
Walii gala ji’aan WBOf galiin argamu,
(Biliyona lama fi miliyona 500)
Kana ji’a jahaa qofaaf yoo buusne
Herrega armaan olii irraa maal hubattu?
1. Oromoon ji’aan qarshii 10 qabsoo ofiif gumachuu dadhabee (otoo qabuu) #garbummaa_waggoota_150f of saaxileera ! Ammas dabalataan of saaxilaa jira! Kuni guyyaatti Bilisummaa ofiif saantima 33 buusuuf dhibaahuun #waaqayyo matumti isaayyuu akka Garbummaa nurratti dheerattu hin taasisu jettaniitu? Mee namoonni kana dubbisaa jirtan guyyaa guyyaan baasii of gammachiisuuf baasnu ilaala.
2. Oromoo miliyoona 25 kana keessaa ammoo namni ji’aan qarshii 10 ol buusachuu danda’u jiraachuu mala. Ji’aan qarshii 10 miti qarshii 1000 tokko buusuuf fedhii kan qabu jiraachuu mala. Kuni hammam akka qabsoo keenya gabbisu argitani?
3. Otoo Oromoon miliyaaona 50 ji’aan qarshii 10 qabsoo ofiif gumaacheehoo maallaqa kanaan #Taankii mitii #Jeettii addunyaa kuni hidhatte hidhachuu hin danda’amu laata?
Kana rabni akka garaa koo naaf godhaare? Oromoon walii galee kana buufataree?
Mee haa yaalluu?
Waan hundaafuu ani kormi keessaan herrega kana isiniif dhiiseera! Yaadichas isiniif dhiiseera. Irratti hojjechuun ammoo kan tokko tokkoo keenyaati.
Ethiopia የእለቱ ትኩስ ዜና አዲስ ፋክትስ መረጃ Addis Facts Ethiopian News Messay Mekonnen Tplf
It is this racist, imperious, retrograde and supremacist belief that represents the greatest threat to Ethiopian “unity”, not the legitimate political aspiration of Ethiopian Somalis. Very worrying how these degenerate views are gaining momentum in recent times. https://t.co/Y2BaKCFTNZ
— Awol Allo (@awolallo) May 23, 2020